လူကြိုက်အများဆုံး အနမ်း(၁၈) မျိုး – မြန်မာသတင်းစုံ
လူကြိုက်အများဆုံး အနမ်း(၁၈) မျိုး
Posted on December 15, 2020 Author admin	Comments Off on လူကြိုက်အများဆုံး အနမ်း(၁၈) မျိုး
အနမ်းအမျိုးအစားပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ရှိပြီး တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်တွေကို အနမ်းပုံစံတွေက ဖော်ပြနေပါတယ်။ ချစ်သူနှစ်ဦးနမ်းနေတဲ့ ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့လည်း သူတို့ရဲ့ relationship အခြေအနေနဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာနဲ့ အမူအကျင့်ကို ခန့်မှန်းနိုင်ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။
ဒီလိုအနမ်းတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လှို့ဝှက်ချက်တွေကို Sheril Kirshenbaum ရဲ့ The science of kissing ဆိုတဲ့ စာအုပ်မှာ အသေအချာရှင်ပြထားပြီး ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံး အနမ်း ၁၈ မျိုးနဲ့ ၎င်းတို့ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သင်အကြိုက်ဆုံး အနမ်းကဘယ်တစ်ခုဖြစ်မလဲ။
၁။ The French kiss
French kiss ဟာ အနမ်းတွေအားလုံးထဲမှာ ရေပန်းအစားဆုံးနဲ့ စုံတွဲတွေအကြိုက်ဆုံး အနမ်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ French kiss ဟာအနုပညာဖြစ်ပြီးတော့ လူတိုင်း ကျွမ်းကျင်စွာတတ်မြောက်သင့်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
ဒီအနမ်းပုံစံဟာ စိတ်အားထက်သန်မှု အမြင့်ဆုံးနဲ့ လှို့ဝှက်ချက်မထားခြင်းဟု အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီး ချစ်သူတွေဟာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ပိုပြီးတွယ်တာစေပါတယ်။
၂။ The quick kiss
အဆိုပါအနမ်းပုံစံဟာ The French kiss နဲ့မတူပဲ လူမြင်ကွင်းမှာတောင် သင့်တော်ပါတယ်။ သင်ရဲ့နှုတ်ခမ်းကို သင့်ချစ်သူရဲ့နှုတ်ခမ်းနဲ့ အနီးဆုံးထိရုံသာထိပြီး ဒါဟာတစ်ယောက်အကြောင်းကို တစ်ယောက်သိနေတာ ကြာပါပြီ ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေပါတယ်။
၃။ A kiss on the cheek( ပါးပေါ်ကအနမ်း)
အချို့နိုင်ငံတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုမှာတော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်နှုတ်ဆက်စကားပြောတဲ့အခါ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းအစား ပါးကိုနမ်းတတ်ကြပါတယ်။ အများစုကတော့ ဒီအနမ်းဟာ သူတို့ရဲ့အချစ်ကို ချစ်သူအားသတိပေးခြင်း သင်္ကေတအဖြစ် ယူဆကြပါတယ်။
၄။ Blowingakiss
အနမ်းဆိုတာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့မှ အထမြောက်တယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ သင့်ရဲ့ချစ်သူက ဘယ်လောက်ဝေးဝေးမှာ ရောက်နေနေ လေထဲကိုမှုတ်လိုက်တဲ့ အနမ်းတပွင့်က သူ့ဆီကိုဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာလည်းနှစ်ဦးသား နားလည်မှုအချက်ပြခြင်းဖြစ်ပြီး အထာပေးတဲ့အပြုအမူအဖြစ်လည်း သုံးကြပါတယ်။
၅။ The “lock” kiss (သော့ခတ်အနမ်း)
ဒီအနမ်းအမျိုးအစားကတော့ တစ်ယောက်က အဝေးကိုထွက်သွားရမယ့် အခြေအနေမှာ သူ့ရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေက ချစ်သူနဲ့မခွဲခွာချင်သေးကြောင်းကို ဖော်ပြနေပါတယ်။
သင့်မှာအချိန်သိပ်မရှိတော့သလို သင်မြန်မြန်သွားမှ ဖြစ်ပါတော့မယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့တဒင်္ဂအချိန်လေးကို ချစ်သူကိုပျော်ရွင်မှုတွေ ပေးချင်နေတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလိုအနမ်းလေး ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။
၆။ The angel’s kiss (နတ်သားရဲ့အနမ်း)
ရင်ခွင်ထဲမှာ အနားယူနေတဲ့ချစ်သူကို ကြင်နာမှုတွေ ပြသတဲ့အခါ သူမရဲ့မျက်ခွံလေးကို ခပ်ဖွဖွလေး နမ်းမိပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ စောက်ရှောက်မှုကိုပြသို့အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုအနမ်းဟာတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်လည်း သက်ရောက်ပါတယ်။
၇။ The nose kiss
သင့်ချစ်သူရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုကို ရရှိဖို့အတွက် သူ့ရဲ့နှာခေါင်းကို နမ်းခြင်း၊ ခပ်ဖွဖွလေးကိုက်ခြင်းဟာ အပြုံးတစ်ပွင့်ကို အလိုလိုဖြစ်လာစေပါတယ်။ ဒါဟာ စကားလုံးတွေထက် ပိုတဲ့တောင်းပန်မှုနဲ့ နာကျင်စရာခံစားချက်တွေကို ခွင့်လွှတ်ပေးတဲ့ သင်္ကေတအဖြစ်လည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။
၈။ The forehead kiss
ဒီအနမ်းကိုတော့ တစ်နည်းအားဖြင့် Mother’s kiss လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဂရုစိုက်မှုတွေနဲ့ သံယောဇဉ်ကို ပြသတဲ့အခါ သုံးကြလို့ပါပဲ။
၉။ The ear kiss
နားရွက်ဟာ နူးညံ့ပြီး တုံ့ပြန်မှုမြင့်တဲ့ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့လူတွေအတွက် နားရွက်ကိုနမ်းတဲ့အခါ ယားတတ်ကြပြီး တစ်ယောက်ယောက်ကို ရယ်မောစေချင်ရင်ဖြစ်ဖြစ် အားပေးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်။
၁၀။ The earlobe kiss
ဒီအနမ်းဟာလည်း စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့ ရင်ခုန်မှုတွေကို မျှဝေချင်တဲ့အခါ ပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်။
၁၁။ The hand kiss
ဒီအနမ်းဟာ ရှေးခေတ်ကတည်းက ခေတ်စားလာပြီး လေးစားမှုနဲ့ မြတ်နိုးမှုကို ပြသခြင်း သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်။ အစဉ်အလာဟောင်းတွေအရ အမျိုးသားက အမျိုးသမီးထက်အသက်ကြီးတဲ့အခါ သူမရဲ့လက်ဖမိုးကို နမ်းဖို့အတွက် သူ့ဘာသာခွင်ပြုပြီး ….
အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းတဲ့အခါ ဒူးထောက်ပြီး လက်ကိုနမ်းတတ်ပါတယ်။ ယခုခေတ်မှာတော့ ယခုလိုအနမ်းကိုမြင်ရခဲလှပြီး ဒီအနမ်းပုံစံဟာ အမျိုးသမီးကို များစွာစိတ်လှုပ်ရှားစေသလို ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုလည်း heart ထိစေပါတယ်။
၁၂။ The neck kiss
လည်ပင်းရဲ့ အရှေ့ဖက်နဲ့ ဘေးဖက်ဟာလည်း ထိလွယ်ရှလွယ်တဲ့ နေရာဖြစ်ပါတယ်။ စုံတွဲတွေရဲ့ ရင်းနှီးမှုကို အဆိုပါအနမ်းနဲ့ ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဒါဟာချစ်ပွဲဝင်ဖို့အတွက် ရှေ့ပြေးနိမိတ်ဖြစ်လို့ပါပဲတဲ့။
၁၃။ The vampire kiss or hickey
ဒီအနမ်းကတော့ ထူးခြားပါတယ်။ ဒီအနမ်းကို ပတ်ဝန်းကျင်ပါမြင်နိုင်လို့ပါပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အနီရောင်အမှတ်ဖြစ်အောင် အားစိုက်ပြီးနမ်းရတာကြောင့် အမှတ်အသားတစ်ခုအနေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ကျန်နေလို့ပါပဲ။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အမှတ်တရတွေပေးတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါ။
၁၄။ The single-lip kiss
အပေါ်နှုတ်ခမ်း သို့မဟုတ် အောက်နှုတ်ခမ်းကိုပဲနမ်းတဲ့အခါ ယခုလို အနမ်းဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ဒါဟာသူတို့အတွက် အနာဂတ်အစီအစဉ်တွေရှိနေပြီး relationship မှာပျော်နေကြတဲ့ သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်။
၁၅။ The Eskimo kiss
အရမ်းအေးတဲ့ ရာသီဥတုမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ စုံတွဲတွေဟာ နွေးထွေးမှုရစေရန် နှာခေါင်းအချင်းချင်း ပွတ်သပ်ပြီး နမ်းကြပါတယ်။ အာဖရိကနိုင်ငံအချို့မှာတော့ နှုတ်ဆက်တဲ့အခါ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းအစား နှာခေါင်းခြင်းထိခြင်းကို အစားထိုးကြပါတယ်။
၁၆။ The lower lip bite
ဒီအနမ်းဟာ French kiss ရဲ့ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ချစ်သူရဲ့နှုတ်ခမ်းကို ခပ်ဖွဖွကိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအနမ်းဟာ ဇီဇာကြောင်တဲ့ ဇာတ်ကောင်အဖြစ် သို့မဟုတ် စိတ်အားထက်သန်မှုအဖြစ် နှစ်မျိုးကွဲနေပါတယ်။
၁၇။ The vacuum kiss (လေဟာနယ်အနမ်း)
ဒီအနမ်းပုံစံဟာ အလွန်ကိုအားကောင်းပြီး အခန့်မသင့်ရင် အသံတွေကြယ်လောင်စွာ ထွက်တတ်ပါတယ်။ သင့်နှုတ်ခမ်းတွေ ညောင်းလာတဲ့အခါ အနမ်းဟာလည်းအားပျော့ လာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အချစ်ခြင်းပြိုင်တဲ့ အခါမှာသုံးပါ။
၁၈။ Bodily contact
ဒီအနမ်းဟာ စုံတွဲတွေ မကြာခဏနမ်းတတ်ကြပြီး ခန္ဓာကိုယ်ချင်း ပူးကပ်နေတာကြောင့် လူများတဲ့နေရာမှာလည်း နှုတ်ဆက်တဲ့အခါမျိုးမှာ နမ်းတတ်ကြပါတယ်။ အခြားလူတွေကိုတောင် သင်သတိမထားမိတော့အောင် အစွမ်းထက်လွန်းတဲ့ အနမ်းပါ။
တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဘယ်လောက်ထိနားလည်မှု ရှိတယ်ဆိုတာကိုပါ ဖော်ပြနေတာကြောင့် နမ်းတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်ချင်း ပူးကပ်နေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သင်တို့ရဲ့သံယောဇဉ်တွေ ခိုင်မြဲပါလိမ့်မယ်။
LM_Naung_Naung / Lifestyle_Myanmar / Ref-Brightside
အနမျးအမြိုးအစားပေါငျး ၁၀၀ ကြျောရှိပွီး တဈဦးခငျြးစီရဲ့ ကိုယျပိုငျခံစားခကျြတှကေို အနမျးပုံစံတှကေ ဖျောပွနပေါတယျ။ ခဈြသူနှဈဦးနမျးနတေဲ့ ပုံစံကိုကွညျ့ပွီးတော့လညျး သူတို့ရဲ့ relationship အခွအေနနေဲ့ လူတဈယောကျရဲ့ သှငျပွငျလက်ခဏာနဲ့ အမူအကငျြ့ကို ခနျ့မှနျးနိုငျကွောငျးလညျး သိရပါတယျ။
ဒီလိုအနမျးတှနေဲ့ ပတျသတျပွီး လှို့ဝှကျခကျြတှကေို Sheril Kirshenbaum ရဲ့ The science of kissing ဆိုတဲ့ စာအုပျမှာ အသအေခြာရှငျပွထားပွီး ပျေါပွူလာအဖွဈဆုံး အနမျး ၁၈ မြိုးနဲ့ ၎င်းငျးတို့ရဲ့ အဓိပ်ပာယျကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။ သငျအကွိုကျဆုံး အနမျးကဘယျတဈခုဖွဈမလဲ။
French kiss ဟာ အနမျးတှအေားလုံးထဲမှာ ရပေနျးအစားဆုံးနဲ့ စုံတှဲတှအေကွိုကျဆုံး အနမျးတဈမြိုးဖွဈပါတယျ။ ကြှမျးကငျြသူတှကေတော့ French kiss ဟာအနုပညာဖွဈပွီးတော့ လူတိုငျး ကြှမျးကငျြစှာတတျမွောကျသငျ့တယျလို့ ပွောကွပါတယျ။
ဒီအနမျးပုံစံဟာ စိတျအားထကျသနျမှု အမွငျ့ဆုံးနဲ့ လှို့ဝှကျခကျြမထားခွငျးဟု အဓိပ်ပာယျရှိပွီး ခဈြသူတှဟော တဈယောကျကိုတဈယောကျ ပိုပွီးတှယျတာစပေါတယျ။
အဆိုပါအနမျးပုံစံဟာ The French kiss နဲ့မတူပဲ လူမွငျကှငျးမှာတောငျ သငျ့တျောပါတယျ။ သငျရဲ့နှုတျခမျးကို သငျ့ခဈြသူရဲ့နှုတျခမျးနဲ့ အနီးဆုံးထိရုံသာထိပွီး ဒါဟာတဈယောကျအကွောငျးကို တဈယောကျသိနတော ကွာပါပွီ ဆိုတဲ့အဓိပ်ပာယျသကျရောကျစပေါတယျ။
၃။ A kiss on the cheek( ပါးပျေါကအနမျး)
အခြို့နိုငျငံတှရေဲ့ ယဉျကြေးမှုမှာတော့ တဈယောကျကိုတဈယောကျနှုတျဆကျစကားပွောတဲ့အခါ လကျဆှဲနှုတျဆကျခွငျးအစား ပါးကိုနမျးတတျကွပါတယျ။ အမြားစုကတော့ ဒီအနမျးဟာ သူတို့ရဲ့အခဈြကို ခဈြသူအားသတိပေးခွငျး သင်ျကတေအဖွဈ ယူဆကွပါတယျ။
အနမျးဆိုတာ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာထိတှမှေ့ အထမွောကျတယျလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ သငျ့ရဲ့ခဈြသူက ဘယျလောကျဝေးဝေးမှာ ရောကျနနေေ လထေဲကိုမှုတျလိုကျတဲ့ အနမျးတပှငျ့က သူ့ဆီကိုဆိုကျဆိုကျမွိုကျမွိုကျ ရောကျပါလိမျ့မယျ။ ဒါဟာလညျးနှဈဦးသား နားလညျမှုအခကျြပွခွငျးဖွဈပွီး အထာပေးတဲ့အပွုအမူအဖွဈလညျး သုံးကွပါတယျ။
၅။ The “lock” kiss (သော့ခတျအနမျး)
ဒီအနမျးအမြိုးအစားကတော့ တဈယောကျက အဝေးကိုထှကျသှားရမယျ့ အခွအေနမှော သူ့ရဲ့နှုတျခမျးတှကေ ခဈြသူနဲ့မခှဲခှာခငျြသေးကွောငျးကို ဖျောပွနပေါတယျ။
သငျ့မှာအခြိနျသိပျမရှိတော့သလို သငျမွနျမွနျသှားမှ ဖွဈပါတော့မယျ။ ဒါပမေယျ့ သငျ့ရဲ့တဒင်ျဂအခြိနျလေးကို ခဈြသူကိုပြျောရှငျမှုတှေ ပေးခငျြနတေယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီလိုအနမျးလေး ဖွဈပျေါလာတာပါ။
၆။ The angel’s kiss (နတျသားရဲ့အနမျး)
ရငျခှငျထဲမှာ အနားယူနတေဲ့ခဈြသူကို ကွငျနာမှုတှေ ပွသတဲ့အခါ သူမရဲ့မကျြခှံလေးကို ခပျဖှဖှလေး နမျးမိပါလိမျ့မယျ။ ဒါဟာသငျ့ရဲ့ခံစားခကျြတှနေဲ့ စောကျရှောကျမှုကိုပွသို့အတှကျ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးတဈခုဖွဈပါတယျ။
ဒီလိုအနမျးဟာတဈယောကျကိုတဈယောကျ ယုံကွညျတယျဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျလညျး သကျရောကျပါတယျ။
သငျ့ခဈြသူရဲ့ အာရုံစူးစိုကျမှုနဲ့ ဆှဲဆောငျမှုကို ရရှိဖို့အတှကျ သူ့ရဲ့နှာခေါငျးကို နမျးခွငျး၊ ခပျဖှဖှလေးကိုကျခွငျးဟာ အပွုံးတဈပှငျ့ကို အလိုလိုဖွဈလာစပေါတယျ။ ဒါဟာ စကားလုံးတှထေကျ ပိုတဲ့တောငျးပနျမှုနဲ့ နာကငျြစရာခံစားခကျြတှကေို ခှငျ့လှတျပေးတဲ့ သင်ျကတေအဖွဈလညျး သုံးနိုငျပါတယျ။
ဒီအနမျးကိုတော့ တဈနညျးအားဖွငျ့ Mother’s kiss လို့လညျးချေါပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ဂရုစိုကျမှုတှနေဲ့ သံယောဇဉျကို ပွသတဲ့အခါ သုံးကွလို့ပါပဲ။
နားရှကျဟာ နူးညံ့ပွီး တုံ့ပွနျမှုမွငျ့တဲ့ အင်ျဂါအစိတျအပိုငျး ဖွဈပါတယျ။ တခြို့လူတှအေတှကျ နားရှကျကိုနမျးတဲ့အခါ ယားတတျကွပွီး တဈယောကျယောကျကို ရယျမောစခေငျြရငျဖွဈဖွဈ အားပေးရငျပဲဖွဈဖွဈ ပွုလုပျတတျကွပါတယျ။
ဒီအနမျးဟာလညျး စိတျအားထကျသနျမှုနဲ့ ရငျခုနျမှုတှကေို မြှဝခေငျြတဲ့အခါ ပွုလုပျတတျကွပါတယျ။
ဒီအနမျးဟာ ရှေးခတျေကတညျးက ခတျေစားလာပွီး လေးစားမှုနဲ့ မွတျနိုးမှုကို ပွသခွငျး သင်ျကတေဖွဈပါတယျ။ အစဉျအလာဟောငျးတှအေရ အမြိုးသားက အမြိုးသမီးထကျအသကျကွီးတဲ့အခါ သူမရဲ့လကျဖမိုးကို နမျးဖို့အတှကျ သူ့ဘာသာခှငျပွုပွီး ….
အခွားတဈဖကျမှာတော့ လကျထပျခှငျ့တောငျးတဲ့အခါ ဒူးထောကျပွီး လကျကိုနမျးတတျပါတယျ။ ယခုခတျေမှာတော့ ယခုလိုအနမျးကိုမွငျရခဲလှပွီး ဒီအနမျးပုံစံဟာ အမြိုးသမီးကို မြားစှာစိတျလှုပျရှားစသေလို ပတျဝနျးကငျြကလူတှကေိုလညျး heart ထိစပေါတယျ။
လညျပငျးရဲ့ အရှဖေ့ကျနဲ့ ဘေးဖကျဟာလညျး ထိလှယျရှလှယျတဲ့ နရောဖွဈပါတယျ။ စုံတှဲတှရေဲ့ ရငျးနှီးမှုကို အဆိုပါအနမျးနဲ့ ခှဲခွားနိုငျပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လညျးဆိုတော့ ဒါဟာခဈြပှဲဝငျဖို့အတှကျ ရှပွေ့ေးနိမိတျဖွဈလို့ပါပဲတဲ့။
ဒီအနမျးကတော့ ထူးခွားပါတယျ။ ဒီအနမျးကို ပတျဝနျးကငျြပါမွငျနိုငျလို့ပါပဲ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ အနီရောငျအမှတျဖွဈအောငျ အားစိုကျပွီးနမျးရတာကွောငျ့ အမှတျအသားတဈခုအနနေဲ့ ခန်ဓာကိုယျအပျေါကနျြနလေို့ပါပဲ။ တဈယောကျကိုတဈယောကျ အမှတျတရတှပေေးတဲ့ အဓိပ်ပာယျပါ။
အပျေါနှုတျခမျး သို့မဟုတျ အောကျနှုတျခမျးကိုပဲနမျးတဲ့အခါ ယခုလို အနမျးဖွဈပျေါလာပါတယျ။ ဒါဟာသူတို့အတှကျ အနာဂတျအစီအစဉျတှရှေိနပွေီး relationship မှာပြျောနကွေတဲ့ သင်ျကတေဖွဈပါတယျ။
အရမျးအေးတဲ့ ရာသီဥတုမှာ နထေိုငျကွတဲ့ စုံတှဲတှဟော နှေးထှေးမှုရစရေနျ နှာခေါငျးအခငျြးခငျြး ပှတျသပျပွီး နမျးကွပါတယျ။ အာဖရိကနိုငျငံအခြို့မှာတော့ နှုတျဆကျတဲ့အခါ လကျဆှဲနှုတျဆကျခွငျးအစား နှာခေါငျးခွငျးထိခွငျးကို အစားထိုးကွပါတယျ။
ဒီအနမျးဟာ French kiss ရဲ့ပုံစံတဈမြိုးဖွဈပွီး ခဈြသူရဲ့နှုတျခမျးကို ခပျဖှဖှကိုကျခွငျး ဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုအနမျးဟာ ဇီဇာကွောငျတဲ့ ဇာတျကောငျအဖွဈ သို့မဟုတျ စိတျအားထကျသနျမှုအဖွဈ နှဈမြိုးကှဲနပေါတယျ။
၁၇။ The vacuum kiss (လဟောနယျအနမျး)
ဒီအနမျးပုံစံဟာ အလှနျကိုအားကောငျးပွီး အခနျ့မသငျ့ရငျ အသံတှကွေယျလောငျစှာ ထှကျတတျပါတယျ။ သငျ့နှုတျခမျးတှေ ညောငျးလာတဲ့အခါ အနမျးဟာလညျးအားပြော့ လာပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အခဈြခွငျးပွိုငျတဲ့ အခါမှာသုံးပါ။
ဒီအနမျးဟာ စုံတှဲတှေ မကွာခဏနမျးတတျကွပွီး ခန်ဓာကိုယျခငျြး ပူးကပျနတောကွောငျ့ လူမြားတဲ့နရောမှာလညျး နှုတျဆကျတဲ့အခါမြိုးမှာ နမျးတတျကွပါတယျ။ အခွားလူတှကေိုတောငျ သငျသတိမထားမိတော့အောငျ အစှမျးထကျလှနျးတဲ့ အနမျးပါ။
တဈယောကျကိုတဈယောကျ ဘယျလောကျထိနားလညျမှု ရှိတယျဆိုတာကိုပါ ဖျောပွနတောကွောငျ့ နမျးတဲ့အခါ ခန်ဓာကိုယျခငျြး ပူးကပျနဖေို့ အရေးကွီးပါတယျ။ သငျတို့ရဲ့သံယောဇဉျတှေ ခိုငျမွဲပါလိမျ့မယျ။
အမျိုးသမီးတို့ကို လင်စိတ် သားစိတ် ကုန်စေသော ယောက်ျား(၁၂)မျိုး
အမျိုးသမီးတို့ကို လင်စိတ် သားစိတ် ကုန်စေသော ယောက်ျား(၁၂)မျိုး ၁။ ချွေးထွက်အလွန်သန်ပြီး တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု့နဲသော ရေချိုး ခေါင်းလျှော် အလွန်ပျင်းပြီး တကိုယ်လုံး အပုတ်နံ့မျိုးစုံထွက်နေသော ယောက်ျား ၂။ ဆေးလိပ်ကို တနေကုန် ဖင်မီးခိုးထွက်အောင် သောက်ပြီး လူတစ်ကိုယ်လုံး မိးခိုးခေါင်းတိုင်နံ့နံ့နေသော ယောက်ျား ။ ၃။သွားတွေမည်းညစ်နေအောင် ကွမ်းစားလွန်းသောယောက်ကျား။၄မိန်းမလိုက်စားလွန်းသောယောက်ျား ၅။တစ်နေကုန် ဝတ်ထားသော အပြင်သွား ဝတ်စုံကို မချွတ်ဘဲ ခြေလက် မဆေးကြောပဲ အိမ်ယာပေါ် ဒိုင်ဗင်ထိုးအိပ်တတ်သော ယောက်ျား ၆။ဘီယာ၊ အရက် မျိုးစုံ သောက်စားပြီး ညဘက်အိမ်သာတက်တိုင်း အိမ်သာရေတောင် ဆွဲချဖို့ ပျင်းသော ယောက်ျား ၇။ မိမိ အတွင်းခံကို ထ ဆင်တူးပုံစံ ကွင်းလုံးလေးတွေလုပ်ပြီး ကုတင်အောက်ကို ခြေထောက်နဲ့ ခတ်ထုတ်တတ်သော ယောက်ျား ၈။ […]
နဖူးကို နမ်းရခြင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ် (၅)မျို
နဖူးကို နမ်းရခြင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ် (၅)မျိုး အနမ်းကို အများအားဖြင့် အမျိုးသားတွေက စတင်လေ့ရှိကြပါတယ်။ အမျိုးသမီးက အနမ်းကို လက်ခံတုန့်ပြန်တဲ့ ဘက်မှာပဲ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ချစ်သူကောင်လေးက ချစ်သူမိန်းကလေးကို နဖူးကို နမ်းတဲ့အခါ ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်တွေ ရှိသလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) လေးစားမြတ်နိုးမှု သိပ်ကို လေးစားမြတ်နိုးရတဲ့ ချစ်သူဆိုရင် အမျိုးသားတွေက နဖူးကို ကြင်ကြင်နာနာ နမ်းလေ့ရှိပါတယ်။ အနမ်းခံရတဲ့ အမျိုးသမီးဟာ ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာပိုင်းနဲ့ အလွန်လှပတဲ့ ရုပ်အဆင်း၊ ထက်မြတ်တဲ့ ဉာဏ်ပညာကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သဘောပါ။ (၂) ဂရုစိုက်တန်ဖိုးထားမှု သူဟာ သင့်ကို အမြဲတန်ဖိုးထား ဂရုစိုက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ သက်သေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နဖူးကို နမ်းတဲ့အနမ်းမှာ သံယောဇဉ်တွေ၊ အကြင်နာတရားတွေ စာနာထောက်ထားမှုတွေ၊ နားလည်လက်ခံမှုတွေ အများကြီးကို စုပေါင်း […]
သူမရဲ့ ၁၄ နှစ်အရွယ်ကပုံလေးတွေထုတ်ပြရင်း ဘဝကို ခက်ခဲကြမ်းတမ်းစွာ ဖြတ်သန်းခဲ့ရပုံကို ရင်ဖွင့်ပြောပြလာခဲ့တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး
အသက် ၁၁နှစ်အရွယ် ကလေးကို ရေအိုင်ထဲခေါ်ကာ ဓမ္မတာဆန့်ကျင်